Dhugaa Haacaaluu sabaaf dhiyeessine malee qalmaaf hin qopheessine – Kichuu
HomeAfaan OromooRadioDhugaa Haacaaluu sabaaf dhiyeessine malee qalmaaf hin qopheessine
“Dhugaa Haacaaluu sabaaf dhiyeessine malee qalmaaf hin qopheessine” – Guyyoo Waariyoo
Ajjeechaan artiist Haacaaluu Hundeessaa gaaffiif deebii inni yeroo dhumaatiif OMN waliin taasisee tureen akka walqabatu Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa ibsa yeroo garaagaraa kennaa tureen himeera.
(bbcafaanoromoo)–Abbaan Alangaa OMN Haacaaluun qaamni Shanee jedhamu isa doorsisaa jiraachuu bakka ibsu keessaa kutee tamsaasuu hime
Gaaffiif deebiin guutuun sa’aa tokkoofi daqiiqaa 11 kan dheeratu ta’uus OMN garuu gaaffiifi deebii kana keessaa muree kan tamsaase daqiiqaa 47 ta’uus abbaan Alangaa ibsa guyyoota sadii dura kenneen beeksisee ture.
Gaffiif deebii cite keessatti Art. Haacaaluun jijjiiramni dhufe kun kan guddataa deemu ta’uu, deeggaramuu akka qabus dubbateera jedheera Abbaan Alangaa Federaalaa.
Gaaffiif deebii kanarraa wanti citee hafe jedhame Wiixata galgala miidiyaalee mootummaan tamsaafame.
Gaazexessaan OMN artiist Haacaaluu Hundeessaa dubbise Guyyoo Waariyoo Haacaaluun gaaffiif deebii san keessatti maqaa shanee gonkumaa hin kaafnee jechuun BBC’tti himeera.
Wanni citee hafe maali?
Af-gaaffii sana keessaa haasaan citee hafe akka ture kan amane gaazexessaa Guyyoon, sagantaa saniif yeroon qabameef daqiiqaa 35 eeguuf jecha wanni keessa kutamee jira jedhe.
Waan haasa’ame guutuu hin dabarsituu kan jedhu Guyyoon, ‘’gaaffiifi deebii aniifi Haacaaluun goone keessa kan keessaa baasne ni jira. Garuu akka amma isaan jedhan itti yaadamee kan keessaa baasne tokkolleen hin jirtuu’’ jedha.
Af-gaaffiin torban sadii dura OMN irratti tamsaafame karoora ji’a shaniif qabame turee fi sababa garaagaraan osoo hin hojjetamiin amma gahe akka ta’e kan dubbatu Guyyoon, yaadni sagantaa kana hojjechuu kan Art. Haacaaluu akka ta’e hima.
‘‘Haacaaluun akka Oromootti nama dhageettii guddaa qabu, nama namni cufti jaalatu miidiyaa hawaasa gubbaatti nama cufarratti ololli miidiyaa hawaasaa ni ka’a, kaayyoon af-gaaffii san gooneef dhugaa jirtu namni kaan akka dhagahuufi.’’
Erga af-gaaffiin sun waraabamee booda wantoota keessaa osoo bahanii jedhurratti waliin mariyachuullee hima.
Qaamoleen garaagaraa isa doorsisuu qaamanis yoo wal argan Af-gaaffii san keessattis dubbaateeraa kan jedhu Guyyoon, akka aanga’ootni Abbaa Alangaa jedhanitti garuu ‘’Shaneen na doorsisa kan jedhu dubbachuu isaa hin qaabadhuu’’ jedha.
Haacaaluun doorsisni gara garaa akka irra gahu amma duras dubbataa waan tureef waan haaraa inni dubbaterratti fuulleffachuu hima Guyyoon.
Eenyu akka isa doorsisu gaafadhee maqaa dhahee deebii naaf hin kennine kan jedhu gaazexeessaan kun silaa maqaa dhaheera ta’ee hin hafu ture jedha
Kanaan alatti artiist Haacaaluun nu gaafatee kan keessaa kunne wantootni lamaan tokko jiruu jedha.
‘’Yeroon qilleensaa naa kenname daqiiqaa 35, artiist Haacaaluu waan sabi dhagahuu barbaaduuf, ilaalcha gaazexessumaatiin waan uummatni Oromoo dhagahuu qaba jedhe daqiiqaa 50 keessaa baasee.’’
Wanna jijjiirama biyyaa ilaalchisee dubbate OMN keessaa kutee hambisee jechuun waan mootummaan qeeqe irratti Guuyyoon yoo deebisu, wanna gaarii jijjiirama kana kan inni ibse hedduu dabarsineerraa jedha.
Gama mootummaan ‘’OMN Haacaaluu qalmaaf dhiyeessan’’ jechuun kan ibsame saalfaacahiisaadha jechuun, qaamni isa midhuuf dorsiisu jiraachuu bakki hime kan cite waan sun irraa deddeebiin miidiyaalee hedduurratti darbaa sababa tureefi jedha Guyyoon.
Af Gaaffiin OMN ajjeefamuu isaaf sababaa?
Ajjeefamuun Art. Haacaaluu yoo dhagaahamu hooggantootni mootummaa fi namootni kaaniis af-gaaffii OMN irratti du’a isaa torbee dura tamsa’e akka sababatti ibsaa turan.
Duuti artiist Haacaaluu du’a nu hundaatii kan jedhu Guyyoon, “af-gaaffiin sun Art. Haacaaluufi saba bal’aa walitti fidee dhugaan Haacaaluu akka mul’atuuf gahee olaanaa tapahatee jedheen yaadaa” jedha.
Af-gaffiin sun feesbuukii irratti kallattiin yoo darbu namni 24,000 ol caqasaa turuu, saniin boodas yaadni gaggaariin kennamaa waan tureef hojii kanaaf ‘re’ee naa qaluu qabda’ jedhee itti qoosaa turuullee hima Guyyoon.
Miidiyaa hawaasummaarratti qeeqa ka’aa turan keessaa waayee hojii gurgurtaa sibiila ijaarsaa fi maallaqa mootummaarraa fudhate jedhamee haasaa dhuunfaan waliin qabaniin dubbiin kun soba ta’uu akka beekuufi namni kaan dhugaa jirtu haa beekuuf akka gaafates dubbate Guyyoon.
‘’Dhugaa Haacaaluu sabaaf dhiyeessee oolmaa ooleef jedhee malee qalmaaf dhiyeesse jedhee hin yaaduu’’ jedha.
Af-gaaffiin sun erga tamsaasamee booda ergaan sossodaachisuu narra gahaa turee kan jedhu Guyyoon artiist Haacaaluun qaamolee akkas akkasirraa miidhaan sirra gahuu waan danda’uuf of eeggadhu naan jechaa tures jedha.
Qaamni Haacaaluun irraa of eeggadhu jedhuun eenyu akka ta’e akkasumas qaamotni ergaafi bilbilaan isaas doorsisan eenyu akka ta’an garuu ifatti maqaa dhahee hin himne.
Hojii gaazexessummaa hojjechuu malee badiin dalage hin jiruu kan jedhu gaazexessaa Guyyoon erga Haacaaluun ajjeefamuu booda isaa fi maatii isaarra doorsifni garaa garaa gahaa akka jiru dubbata.
Qe’een maatii isaa Godina Booranaa keessa jiran sakatta’amuufi Guuyyoon as dhokate jira fidaa jedhamanii dorsifamaa akka jiran himeera.
Gaazexeessitoonni OMN kaan maal keessa jiru?
Daariktarri OMN Girmaa Guutamaa erga miidiyichi cufamee gaazexessitootni maal keessa akka jiran baruu hin dandeenye jedha.
Sodaa keessa waan jiraniif bilbila cufachuun dhokatanii akka jiran dubbata.
Gaazexessitootni tokko tokko nageenya isaaniif yaadda’anii mana jireenyaa isaanii keessaa bahuun bakka biraa dhokatanii akka jiran hima Obbo Girmaan.
Poolisiin waajjira isaanii sakatta’uun waan barbaadan keessaa fudhatanii cufuu fi ergasii gara waajjirichaa deemanii akka hin beekne dubbatan.
Hanga ammaattis gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa jedhamu qofatu hidhamuu quba qaba jedhe.
Girmaan manni isaa sakatta’amuun amma achii bahee bakka biraa akka jiruu dubbata.
”Odeeffannoo akka miidiyaa keenya cufan qabna. Kun ajandaa waggaa lamaaf deemaa turedha. Jawaar nurraa hiitan malee OMN nurraa cuftan malee jechuun paartiin naannoo Amaaraa bulchu gaafachaa ture.”
”Gaazexessitootni keenya oduu tokko yeroo hojjetan gamtokkee karaa taheen hin hojjetan. Addatti oduu yoo tahe.”
“Wal gahii adda addaa irratti namootni yoo dubbatan yaada isaanii ni dabarsina. Kun ammoo qabiyyee uummataati. Kun namoota kaan tokko tokkos aarsuu danda’a.”
Qondaalota mootummaas xalayaadhaan afeeraa turre kan jedhu Obbo Girmaan miidiyicha kan paartii mormituu tahe jedhamuunis sirrii akka hin taane hima.
OMN weerara Covid-19 ittisuuf jecha afaanota 18’n tamsaasaaa akka ture himuun inumaa waajjiricha mana sabaa fi sab-lammootaa goone jechuun walitti bu’iinsa sabaan himatamuun sirrii akka hin taane dubbata.